सिक्का बटुलेर ११ हजारको बिजुली बिल तिर्दा यस्तो हंगामा ! | Nepal123.com
Posted in रोचक/विचित्रको विश्व, विचित्र संसार
Author: admin Published Date: March 19, 2020 LeaveaComment on सिक्का बटुलेर ११ हजारको बिजुली बिल तिर्दा यस्तो हंगामा !
आजकल विद्युतको उपभोग निकै बढेको छ । सस्तो र सुलभ रुपमा विद्युतको उपभोग गर्न पाएपछि धेरैको जीवनमा यो अपरीहार्य बनेको छ । तर यहि विद्युतको बिल तिर्ने बेलामा कसैले नगद वा बैंक भुक्तानको सट्टा सिक्का दियो भने के होला ? त्यो पनि ११ हजार भन्दा बढि रकमको भुक्तानी सिक्काबाट गर्न चाहेमा के होला ? भारतको […]
Tagged रोचक/विचित्रको विश्व, विचित्र संसार
← प्रभावकारी निर्णय लागू गराउन माग
२५ जना भन्दा बढी सहभागी हुने भएपछि संसदीय समिति बैठक स्थगित →